Jamie Carragher oo ka codsaday Liverpool inaysan u naxariisanin kooxda Manchester City xilli ciyaareedkan – Gool FM
(Liverpool) 10 Okt 2019. Halyeeyga kooxda Liverpool ee Jamie Carragher ayaa ka codsaday wiilasha Jürgen Klopp inay ka faa’ideystaan inta ugu badan dhaawacyada iyo dhibaatooyinka farsamo ay la kulantay naadiga Manchester City oo ay ku tartamayaan hanashada horyaalka Premier League.
Waxaa hoos u dhac ku yimid natiijooyinka kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League muddadii u dambeysay waxayna iska lumisay dhibco badan, gaar ahaan kaddib markii ay la kulantay dhibaatooyin dhaawac ee dhanka daafaca ah, taasoo ka saaciday Liverpool inay hogaanka ku qabato 8 dhibcood nadiif ah.
Jamie Carragher ayaa u sheegay “talkSPORT” ee dalka England:
“Waxaan u maleynayaa waxa aan ku aragno Manchester City haatan inay la micno tahay inay saameyn ku yeelanayaan tirada dhaawacyada ay la kulantay, dhibaatooyinka noocan oo kale ah waxay saameyn ku yeelan kartaa koox kasta”.
“Marka waxaan u maleynayaa inay xaalad wanaagsan inoo tahay anaga, Liverpool waa inay ka faa’ideysataa arrintan, isla markaana ay isku daydaa in dhibcaha ay gaarsiiso 10 ama 12 dhibcood hadii ay macquul tahay”.
“Shaki kuma jiro marka uu ciyaaryahan sida Aymeric Laporte ku soo laabto difaaca City, waxay ku istaagi karaan lugahooda markale, waxayna sameyn karaan sida saxda ah, waxa ay sameysay Liverpool, waxayna badin karaan 17 ama 18 kulan”.
Isku aadka Koobka General Daa'uud oo la sameeyay… (Kulamadee ayaa ugu xiiso badan?)